ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုဗေဒဓာတ်ခွဲခန်းသည် ရိုးရှင်းပြီး လက်ရာမြောက်သော အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုလေဝင်လေထွက်စနစ်၊ နှိပ်ရေနှင့် သန့်စင်သောရေပေးဝေမှုဖြင့် ဒီဇိုင်းပိုင်းအရ ရိုးရှင်းပြီး လက်ရာမြောက်ပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုဗေဒစမ်းသပ်မှုများမှ လိုအပ်သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါသည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုဓာတ်ခွဲခန်းအတွက် စမ်းသပ်ကိရိယာများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း-
1. စိုစွတ်သောတစ်ရှူးများအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စမ်းသပ်ကိရိယာ- ထုပ်ပိုးမှုတင်းကျပ်မှုစမ်းသပ်ကိရိယာ၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်စမ်းသပ်ကိရိယာ၊ ယက်မလုပ်သောရေစုပ်ယူမှုစမ်းသပ်ကိရိယာ
2. တိကျမှုမြင့်မားသောတူရိယာများ- ဂဏန်းတစ်ထောင်အီလက်ထရွန်းနစ်လက်ကျန်၊ ph စမ်းသပ်ကိရိယာ၊ ဆန့်နိုင်အားစမ်းသပ်ကိရိယာ
3. ရေချိုးခန်း၊ သံမဏိလျှပ်စစ်ဓာတ်ပေါင်းခံစက်၊ ultrasonic သန့်ရှင်းရေးစက်၊ အလျားလိုက် အရောင်ခြယ်သည့် ဖျော်စက်၊ ဖန်ခွက်အမျိုးမျိုး၊ စားသုံးနိုင်သော ပစ္စည်းများ၊ ဓာတ်ပစ္စည်းများ၊ စသည်တို့။
အဏုဇီဝဗေဒအခန်းနှင့် အပြုသဘောဆောင်သော ထိန်းချုပ်ခန်းဟူ၍ ပိုင်းခြားထားသည့် သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များသာ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။
အပြင်မှအတွင်းပိုင်းအထိ၊ အသေးစားစစ်ဆေးရေးဧရိယာသည် အဝတ်လဲခန်း → ဒုတိယအ၀တ်လဲခန်း → ကြားခံအခန်း → သန့်ရှင်းသောအခန်းဖြစ်ပြီး ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပြတင်းပေါက်မှ နားလည်သဘောပေါက်ပါသည်။ လေယာဉ်အပြင်အဆင်တစ်ခုလုံးသည် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအလိုက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့် ပြည့်မီနိုင်ပြီး အာကာသကို အပြည့်အဝအသုံးပြုခြင်း၊ စမ်းသပ်လည်ပတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အညီ အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများပါရှိသော အခန်းများ တပ်ဆင်ထားပြီး လည်ပတ်မှုလိုင်းသည် အဆင်ပြေမြန်ဆန်ပါသည်။
လေသန့်စင်မှုပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးသည့်အပြင်၊ အသေးစားစစ်ဆေးရေးဧရိယာသည် ဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အခါ လိုအပ်သော ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးကိရိယာအချို့ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။ Interlocking Transfer Window- ဓာတ်ခွဲခန်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်မှု၏ဘေးကင်းမှုကိုသေချာစေရန်။ ဓာတ်ခွဲခန်းမှ မထုတ်မီ ညစ်ညမ်းနေသော အရာများကို ပိုးသတ်ရန် ပြတင်းပေါက်များတွင် ခရမ်းလွန်မီးလုံးများ ရှိပါသည်။ ၎င်းသည် အိမ်တွင်းနှင့် ပြင်ပလေထု၏ သီးခြားခွဲထွက်မှုကိုလည်း သေချာစေပြီး စမ်းသပ်သူများမှ အရာများကို လွှဲပြောင်းရာတွင် လွယ်ကူစေသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းကို ပိုးသတ်ရန် ပိုးသတ်ဆေး ခရမ်းလွန်မီးခွက် တပ်ဆင်ထားသည်။
အသေးစားစစ်ဆေးရေးဧရိယာတွင် သီးခြားပိုးသတ်သည့်အခန်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအခန်းတစ်ခု တပ်ဆင်ထားသည်။ ပိုးသတ်သည့်အခန်းတွင် စမ်းသပ်ကိရိယာများနှင့် စားသုံးနိုင်သောပစ္စည်းများအားလုံးကို အပူချိန်မြင့်မြင့်တွင် ပိုးသတ်ရန်အတွက် အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် ဖိအားမြင့်ရေနွေးငွေ့ပိုးသတ်ဆေး ၃ လုံး တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ညစ်ညမ်းမှုကို ထိရောက်စွာ ရှောင်ရှားပြီး စမ်းသပ်မှုရလဒ်များ၏ တိကျမှုကို အာမခံပါသည်။ ၎င်းသည် အဏုဇီဝစမ်းသပ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီး ထိရောက်စွာ စွန့်ပစ်ခြင်းကိုလည်း အာမခံပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ အန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးစေပါသည်။ စိုက်ပျိုးခန်းတွင် ယေဘူယျဘက်တီးရီးယားများနှင့် ယေဘူယျအဏုဇီဝသက်ရှိများ၏ စိုက်ပျိုးမှုအခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီသည့် အဆက်မပြတ်အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ မီးဖို ၃ လုံး တပ်ဆင်ထားပါသည်။
အဏုဇီဝဗေဒဓာတ်ခွဲခန်းပံ့ပိုးပေးသည့်ပစ္စည်းများ- 1. ဒုတိယအဆင့် ဇီဝဘေးကင်းရေး ကက်ဘိနက် 2. သန့်ရှင်းသော အလုပ်ခုံတန်းလျား 3. အလိုအလျောက် ဖိအားမြင့် ရေနွေးငွေ့ ပိုးသတ်ဆေးအိုး 4. အဆက်မပြတ် အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ မီးဖိုချောင် 5. အလွန်နိမ့်သော အပူချိန် ရေခဲသေတ္တာ
ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး တည်ငြိမ်မှုကို စုံစမ်းရန်၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ကုန်ကြမ်းများ၏ အရည်အသွေးကို ခြေရာခံကာ အရည်အသွေးပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ရန် အခြေခံအချက်များ ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် အထူးထုတ်ကုန်နမူနာအခန်းတစ်ခုလည်း ရှိပြီး ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကုန်နမူနာများကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ထားရှိကာ အသုတ်လိုက်၊ သုတ်အားဖြင့်။ အပ်နှံသူတစ်ဦးက စီမံခန့်ခွဲသည့် သက်ဆိုင်ရာနမူနာ မှတ်ပုံတင်စာရင်းကို သတ်မှတ်ပါ။
ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် လက်ရှိဖွင့်လှစ်ထားသော အဓိကစမ်းသပ်ပရောဂျက်များ
တစ်ခါသုံး သန့်ရှင်းရေး ထုတ်ကုန်များ၏ ခြောက်သွေ့သော စိုစွတ်သော သုတ်ဆေးများတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုဗေဒ စမ်းသပ်မှုများ- pH တန်ဖိုး သိရှိခြင်း၊ တင်းကျပ်မှု သိရှိခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း မီးချောင်းများ သိရှိခြင်း၊ ယက်မထုတ်သော ရေစုပ်ယူမှု သိရှိခြင်း စသည်
တစ်ခါသုံး သန့်ရှင်းရေး ထုတ်ကုန်များ၏ ခြောက်သွေ့သော စိုစွတ်သော သုတ်ဆေးများတွင် အဏုဇီဝ စမ်းသပ်ခြင်း- ထုတ်ကုန် အဏုဇီဝ စမ်းသပ်မှု၊ သန့်စင်သော ရေတွင် အဏုဇီဝ စမ်းသပ်မှု၊ လေအဏုဇီဝ စမ်းသပ်မှု၊ ထုတ်ကုန် ပိုးသတ်ခြင်း နှင့် ဘက်တီးရီးယား ပိုးမွှား စစ်ဆေးခြင်း စသည်တို့။